Badbaadadu waa meheradda Ilaahay, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waxaan weydiiyaa dhowr su'aalood dhammaanteena carruurta leh. "Ilmahaagu weligiis ma ku caasiyoobay?" Haddii aad ku jawaabtay haa sida waalidiinta kale oo dhan, waxaan u nimid su'aasha labaad: "Weligaa canuggaaga ma u ciqaabtay caasinimo?" Muddo intee le'eg ayay ciqaabtu socotay? Si cad ayaa u yiri: "Ma u sharaxdey cunuggaaga ciqaabta inaysan dhamaan doonin?" Taasi waxay umuuqataa waalan, miyaanay ahayn?
Annaga oo ah waalidiinta tabar daran oo aan dhammaystirnayn ayaa cafin carruurteenna markii ay caasiyeen. Waxaa jira xaalado aan ciqaabno dambiga haddii aan u aragno inay ku habboon tahay xaalad. Waxaan la yaabanahay intee intee ah ayaa u maleyney inay sax tahay in la ciqaabo carruurteenna inta noloshooda ka harsan?
Masiixiyiinta qaar baa raba inaan aamino inuu Eebbe, aabeheenna jannada ku jiraa, uusan tabar daran ama aan dhameystirnayn, uu ciqaabo dadka weligiis iyo weligiis, xitaa kuwa aan waligood Ciise maqal. Waxay dhahaan, Ilaahow, nimco iyo naxariis ka buuxo.
Aynu si yar u qaadno oo aan ka fikirno, maaddaama uu jiro faraq weyn oo u dhexeeya waxa aan ka baranay Ciise iyo waxa Masiixiyiinta qaar ay aamminsan yihiin in weligeed la xukumi doono. Tusaale ahaan: Ciise wuxuu ina farayaa inaan jeclaano cadaawayaasheena iyo inaan wanaag u sameyno xitaa kuwa ina neceb oo na silciya. Masiixiyiinta qaar ayaa rumeysan in Eebbe kaliya necbahay cadaawayaashiisa, laakiin uu macno ahaan ka dhigaayo inay ku gubtaan cadaabta taasna si dag dag ah oo naxariis la'aan ah weligiis.
Dhanka kale, Ciise wuxuu u duceeyay askartii iskutallaabta ku qodbay: "Aabe, cafi iyaga sababtoo ah ma garanayaan waxay samaynayaan." Masiixiyiinta qaar ayaa baray in Eebbe cafiyo wax yar oo uu horay u saamaxay inuu cafiyo ka hor intaan dunku abuurin. Hadday taasi run tahay, salaadda ciise ma isbadal weyn ku imaan laheyd, miyey taasi ahayn?
Hogaamiye dhalinyaro Christian ah ayaa u sheegay koox dhalinyaro ah sheeko xanuun badan oo ku saabsan la kulanka nin. Isaga qudhiisa ayaa dareemay inay qasab tahay inuu ninkan injiilka ku wacdiyo, laakiin wuu ku guul darreystay inuu sidaas sameeyo intii ay wada-hadlayeen. Markii dambe wuxuu ogaaday in ninkaasi uu ku dhintay shil baabuur isla maalintaas. "Ninkani hadda cadaabta ayuu ku jiraa," ayuu u sheegay dhalinyarada da 'yarta ah ee Masiixiyiinta ah ee indhaha la', halkaasoo uu ku xanuunsanayo xanuun aan la sheegi karin ". Kadib, waxoogaa aamusnaan ah kadib, wuxuu raaciyay: "taasina waa garbahayga hadda". Wuxuu uga sheekeeyay riyooyinkiisa ku saabsan inuu dayacay awgeed. Wuxuu ku ooyay sariir, iyadoo la siinayo fikirka xun ee ah in ninkan miskiinka ah uu ku dhici doono silica dabka weligiis.
Waxaan la yaabanahay sida dadka qaar ay u maareeyaan inay la heshiiyaan waxa ay rumeysan yihiin si farsamo ah oo dhinaca kale ay rumeysan yihiin in Ilaah dunida jecel yahay oo isagu wuxuu u diray Ciise inuu badbaadiyo. Dhanka kale, way rumaystaan (oo leh aaminaad liidata) in Eebbe aad u foolxun yahay si uu u badbaadiyo dadka oo ay u dirto cadaabta sababtoo ah karti darradeenna. "Waxaa lagu badbaadiyay nimco, ma aha shaqooyin," ayay yiraahdaan, waana sax. Waxay leeyihiin fikradda ka soo horjeedda ee injiilka ee ah in masiirka weligeed ah ee dadku kuxiran yahay guusha ama guuldarraysiga hawsheena wacdinta.
Ciise waa Badbaadiyaha, Badbaadiyaha iyo Bixiyaha!
In alla inta aan bini'aadamka jecel nahay carruurteenna, intee in ka badan ayuu Ilaah jeclaadaa? Tani waa su'aal ku saabsan erey-soocelinta - Eebbe wuu jecel yahay si aan xad lahayn inta aan waligeen sameyn karno.
Ciise wuxuu yiri: "meeh aabbo idinku jira, oo markuu kalluun weyddiisto, wiilkiisa siiya masaska kalluunka? ... Haddii aad shar shar leedihiin caruurtiina waxaad siisaan hadiyado wanaagsan, intee in ka badan ayaa Aabaha jannada ah uu Ruuxa Quduuska ah siin doonaa kuwa isaga weyddiista! (Luukos 11,11:13 iyo).
Runtu waa sida uu Yooxanaa inoo sheegay: Ilaah runti wuu jecel yahay dunida. «Maxaa yeelay Ilaah dunidan wuu jeclaa, sidaa aawadeed ayuu u dhashay wiilkiisa keliya, sidaa darteed in kuwa rumaystaa oo dhammu ayan lumin, laakiinse waxay leeyihiin nolosha weligeed ah. Maxaa yeelay Ilaah wiilkiisii ​​uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaadiso isaga. (Yooxanaa 3,16-17).
Badbaadinta adduunkan - waa adduun Ilaah aad u jecel yahay oo isagu u soo diray Wiilkiisa si uu u badbaadiyo - waxay ku xidhan tahay Ilaah oo keliya Ilaah keliya. Haddii badbaadadu annaga noo ahayd iyo guusheena aan gaarsiinayno injiilka dadka, waxaa jiri laheyd dhibaato weyn. Si kastaba ha noqotee, kuma tiirsanaan annaga, laakiin kaliya Ilaah. Ilaah wuxuu u soo diray ciise inuu fuliyo hawshan, si uu noo badbaadiyo, isaguna wuu u dhammaystiray.
Ciise wuxuu yidhi: «Waayo waa doonistii aabbahay in ku alla kii arka oo rumaystaa wiilka lahaadaa nolosha weligeed ah; waana sara kicin doonaa maalinta u dambaysa » (Yooxanaa 6,40).
Waa u shaqeynta Ilaah inuu badbaadiyo, oo Aabbaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ahu sifiican ayey u socdaan. Waa deeq in laga qaybqaato shaqada wanaagsan ee wacdinta. Si kastaba ha noqotee, waa inaan sidoo kale la soconaa in Ilaah inta badan shaqeeyo inkastoo aan awoodin.
Ma nafsaddaada ku dhibtay damiir liqday sababtuna tahay inaad ugu wacdin weyday injiilka qof? U gudbi culayska Ciise! Ilaahay kama xishoodo. Qofna faraha ayuu ku galaa oo waa inuu cadaabta naarta iyada darteed darteed. Ilaaheennu waa wanaagsan yahay, waana naxariis badan yahay, waana xoog badan yahay. Waxaad ku kalsoonaan kartaa inuu kuu shaqeeyo adiga iyo qofkasta sidan.